Ciyaartoy Ka Tirsan Liverpool Oo Dhimasho Isku Diyaariyey, Lacagtiisii Oo Uu Cid Ku Qoray Iyo Murugada XANUUNKA Halista Ah Ee Haleelay - Cadalool.com
Ciyaartoy Ka Tirsan Liverpool Oo Dhimasho Isku Diyaariyey, Lacagtiisii Oo Uu Cid Ku Qoray Iyo Murugada XANUUNKA Halista Ah Ee Haleelay
Wuxuu isku diyaariyey dhimasho, si buuxda ayaanu u saxeexay waraaqaha ciddii qaadanaysa hantidiisa isaga oo ku sugan cusbitaalka dhexdiisa.
Hooyadii ayaa uu qayb ka mid ah lacagtiisa ku qoray, balse muu sheegin cidda yeelanaysa inta kale ee hantidiisa.
Xiddiga khadka difaaca uga ciyaara Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa soo bandhigay nolol murugo leh oo sababtay inuu saxeexo waraaqaha dardaaranka dhaxalkiisa toban sannadood kahor markaas oo si degdeg ah loogu sameeyey qalliin Qabsin ah iyo laba xanuun oo kale oo soo food saaray.
Hooyada dhashay Van Dijk oo lagu magacaabo Ruby ayaa loo sheegay in wiilkeedu uu qarka u saaran yahay nolol dhimasho ah, ayna iskugu darsameen laba xanuun oo kalyaha iyo dahaadhka sare ee kaadi-haysta ah, kuwaas oo keeni karayey inuu si degdeg ah u geeriyoodo.
Noloshan halista ah ee uu soo maray Van Dijk waxa uu ka bartay in dulqaad loo yeesho wax walba, waana sababta aanu halganka Liverpool ugu jirto hanashada horyaalka Premier League aanu isagu ugu arag dagaalkii ugu adkaa ee noloshiisa soo maray, waxaana uu dib usoo xasuustay xilligii noloshiisu khatarta ku jirtay.
“Dhimasho ayaan filayey, waxayna ahayd xaalad aad u kharriban. Markii ugu horreysay noloshayda, kubaddu cagtu macno badan iima lahayn, muhiimna kama ahayn. Kaliya waxaan isku dayayey sidii aan u noolaan lahaa.” Sidaas waxa yidhi Van Dijk oo ka sheekaynayey xaaladdii uu soo maray.
“Hooyaday iyo aniguba waanu ducaysanaynay, haddii aan si daacad ah u hadlana xaalado badan ayaanu ka sheekaysanay. Mar baa jirtay aan cusbitaalka tegayey oo aan saxeexay waraaqo, si haddii aan cusbitaalka ku dhinto ay qayb ka mid ah lacagtaydu ugu tagto hooyaday.” Ayuu yidhi.
Intaa kaddib waxa uu ka sheekeeyey sidii ay u ekaayeen maalmihii qadhaadhaa ee soo maray, waxaanu yidhi: “Cidina may doonaynin inaan soo qaado arrintan, laakiin waxay u baahan tahay in lala tacaalo, sababtoo waxa jirtay fursad aan ku dhiman karayey. Waxaan xasuustaa markii aan sariirta jiifay, waxa kaliya ee aan karayaana ahaayeen tayuubyada iyo xadhkaha jidkayga.
“Jidhkaygu wuu burburay. Waxba maan awoodi karaynin, waana arrinta ugu xun ee maskaxdayda soo martay.”
Van Dijk oo ay da’diisu ahayd 17 jir una ciyaaraya kooxda lagu magacaabo Groningen ayaa waxa uu xanuun ka dareemay caloosha xilli uu tababar samaynayay, kaddibna wuxuu diiday inuu joojiyo ciyaaraha kaddib baadhitaan lagu sameeyey.
48 saacadood kaddib xaaladdu way kasii dartay, welina wuxuu kusii adkaystay in aanu u tegaynin dhakhtar weyn oo xaaladdiisa si dhamaystiran u hubiya.
Kaddib laacibka Tim Keurntjes oo ay isku koox ahaayeen ayaa gaadhiga ku qaaday oo geeyey cusbitaalka xilli subaxnimo ah, waxaana loo sheegay in caafimaadkiisu fiican yahay, waxaana lasoo siiyey daawooyin xanuun baabi’iye ah.
Inyar kaddib waxa qasab noqotay in hooyadii ay saddex saacadood oo safar gaadhi ah soo gasho, waxaana markii ay soo gaadhay ay si degdeg ah ugu wacday baabuurka gurmadka degdega ah ee Ambulance, kaas oo ula cararay cusbitaalka, waxaana lagu sameeyey qalliin degdeg ah, waxaanu xaalad halis ah ku jiray dhawr maalmood.
Kaddib garoomada ayuu kusoo laabtay bilowga xili ciyaareedkii dambe iyadoo uu jidhkiisu dhuubnaaday ama caatoobay, halkaas ayaana uu mar kale kasoo bilaabay ciyaarta sababta u noqotay inuu noqdo xiddiga Liverpool.